ချစ်သူပြန်အလာကို နေ့တိုင်းစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ သမီးငယ်လေး အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။Video
အိုးမိုင်ဂေါ့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဆိုတတ်တဲ့ကမလေး Video ချစ်သူပြန်အလာကို နေ့တိုင်းစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ သမီးငယ်လေး အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။Video ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဗွီယိုဖိုင်လေးကိုရှာဖွေပီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းက မူလတန်းကျောင်းသူလေးဖြစ်ပီး အလွမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် သီဆိုပြသွားတဲ့ဗွီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အရေးကြီးသုံး ပါးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြရလို့ စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကြရပါတယ်။ […]
၁၀နှစ်နေမှ ၁ခါလောက် surprise လုပ်ပေးဖြစ်တယ်လို့ ပြောလာတည့် လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer…
၁၀နှစ်နေမှ ၁ခါလောက် surprise လုပ်ပေးဖြစ်တယ်လို့ ပြောလာတည့် လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer… ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အချစ်တော် လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့ဟာ တွဲလာခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပြီ အမှတ်တရ တွေများစွာရှိပေမယ့် အမြဲတမ်းအမှတ်ရစရာတွေ မရှိခဲ့ပေမယ့် တယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုရှိပြီး အကြိုက်ခြင်းအများစုထပ်တူကျ ကျတည့် စုံတွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်ဟာဆိုရင် […]
ကိုယ်နဲ့ မွဖူးတဲ့ မင်းသား မော်ဒယ် အတော်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို
ကိုယ်နဲ့ မွဖူးတဲ့ မင်းသား မော်ဒယ် အတော်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို နိုင်ငံကျော်အမျိုးသမီးအဆိုတော် ပိုပိုကတော့ သူ့ရဲ့သီချင်း MTV တွေကို ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစား မင်းသား၊မော်ဒယ်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးလေ့ရှိပြီး တွဲမရိုက်ဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား မော်ဒယ် အတော်ရှားတဲ့အကြောင်းကို “တစ်ခါတစ်လေ MV ပြန်ကြည့်ရင် သိပ်ကျေနပ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ မရိုက်ဖူးတဲ့ […]
အွန်လိုင်းမှာလူကြည့်အများဆုံး မသန်စွမ်းတီးဆိုအဖွဲ့ရဲ့ နောက်ထပ်သီချင်းသစ် ရုပ်သံ
အွန်လိုင်းမှာလူကြည့်အများဆုံး မသန်စွမ်းတီးဆိုအဖွဲ့ရဲ့ နောက်ထပ်သီချင်းသစ် ရုပ်သံ ပထမသီချင်းလေးကတော့ ဈေးထဲမှာ မျက်လုံးထဲကလား အုန်းနှောက်ထဲကလားသီချင်းလေးဖြစ်ပီး အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှူ့သူတွေ အရမ်းများခဲ့ပါတယ်။ အဆိုရောတီးရော အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူတို့ခများများမှာတော့ မျက်စိမမြင်ရတဲ့ မသန်ပေမယ့် စွမ်းတဲ့ မသန်စွမ်းလေးတေပါ။ ဘယ်လိုချို့တဲ့မှုတွေဖြစ်နေပေမယ့် ဘ၀ကို လ က်မြှောက်အရှုံးမပေးပဲ ရပ်တည်ကြိုးစားနေကြတာပါ။ တစ်ကယ်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမှ […]
နေမျိုးအောင်ရဲ့သား မင်းသားသစ်လေး မင်းထိုက်နဲ့ ဆက်စီမော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင်တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို သူမက အကုန်ဖွင့်ချ။ ဇာတ်လမ်းကြမ်းပီ
သားဖြစ်သူကို အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင် ရဲ့ ဇနီး ပရိသတ်ကြီးရေ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေမျိုးအောင်ရဲ့ သားကြီးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းထိုက်ကို ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီး ဖြစ်မှာပါနော် ။ Star Award ပွဲကြီးမှာ Star Fairy အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းထိုက်ကတော့ ဆက်စီမော်ဒယ်လ်မလေး […]
“ခင်ပွန်းတိုင်း သိသင့်တဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ နာကျင်မှုတွေ”
“ခင်ပွန်းတိုင်း သိသင့်တဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ နာကျင်မှုတွေ” ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောကြားစရာမလိုဘဲနဲ့ သူတို့စိတ်လိုလက်ရ နားလည်ပေးစေချင်တာတွေရှိတယ်။ အဲဒီလို နားလည်မပေးနိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် နာကျင်ရတာတွေလည်း အ များကြီး ရှိကြပါတယ်။ အချို့ဒဏ်ရာတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သိပ်မကွာလောက်အောင် ထပ်တူကျတတ်ပြန်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ရော လူရော […]
နံနကျ(၇)နာရီအခြိနျ အာရှလမျးမကွီးအလယျမှ လူတဈယောကျ ခေါငျးငိုကျစိုကျ ငိုကျစိုကျနဲ့ လမျးလြှောကျလာလို့ ထိုလူအားမေး ကွညျ့သောအခါ….
နံနကျ(၇)နာရီအခြိနျ အာရှလမျးမကွီးအလယျမှ လူတဈယောကျ ခေါငျးငိုကျစိုကျ ငိုကျစိုကျနဲ့ လမျးလြှောကျလာလို့ ထိုလူအားမေး ကွညျ့သောအခါ…. ယနေ့ ၁၁.၁.၂၀၂၀ နံနက်(၇)နာရီအချိန် ကျွန်တော်ကောကရိတ်ဘက်က ကားမှောက်မှုသတင်း ယူပြီးအပြန်မှာ….. အာရှလမ်းမကြီးအလယ်မှ လူတစ်ယောက် ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာလို့…… ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်အား ပြန်ကွေ့ပြီး ထိုလူအားမေး ကြည့်သောအခါ….. ဘန်ကောက်က […]
အမစေုအား အမရေိကနျသမ်မတ TRUMP ဖိတျကွားမှု မွနျမာသံအမတျကွီး အတညျပွုလိုကျပွီ
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အမရေိကနျကို လာရောကျဖို့ သမ်မတ Donald Trump ရဲ့ ဖိတျကွားခကျြကို ပို့ဆောငျထားပွီးဖွဈကွောငျး အမရေိကနျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီးက အတညျပွု ပွောဆိုပါတယျ။ လူသားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးရေးကိစ်စကို အဓိကထား ဆှေးနှေးမယျ့ အမရေိကနျ-အာဆီယံ အထူး ထိပျသီးဆှေးနှေးပှဲကနေ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ဘာတှေ မြှျောလငျ့နိုငျပါသလဲ၊ အပွညျ့အစုံကို […]
ဆိုဒ်ထဲမှာကြောက်ပြားပိလို့ ဆုံးပါးသွားတဲ့ဦးလေးကြီးက လှေကားရွေ့ပြတဲ့ရုပ်သံ
ဆိုဒ်ထဲမှာကြောက်ပြားပိလို့ ဆုံးပါးသွားတဲ့ဦးလေးကြီးက လှေကားရွေ့ပြတဲ့ရုပ်သံ ထူးဆန်းလွန်းလို့ ပရိတ်သတ်ကြီးကြည့်ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ထဲမှာ မတော်တဆ ကျောက်ပြားပိပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် မကျွတ်မလွတ်သေးပဲ အခုလို လှေကားကိုရွှေ့ပြတာကို မှတ်တ မ်းတင်ထားတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီယိုဖိုင်ကတော့ ကွန်ပျူတာအဖက်တွေ ဖန်တီးချက်တွေမပါ၊ တစ်ခြားသော တစ်ခုခုနဲ့နောက်ကွယ်ကနေ လုပ်ပြတာလည်းမပါ။ အရမ်းရှင်းပါတယ် ရိုက်ပြထားတာ။ ထူးဆန်းလွန်းပါတယ်။ ကိုယ်တေပဲလိုက်မမှီတာလားတော့မသိ။ […]